Maalqabeenada kaliya ma awoodaan inay awoodaan fasaxyada mustaqbalka?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Maalqabeenada kaliya ma awoodaan inay awoodaan fasaxyada mustaqbalka?
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Ilaa 1000 xirfadlayaal ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa wax laga weydiiyey saameynta kororka qiimaha aadka loo saadaalinayo ee ka dhashay cudurka faafa ee suuqa guud.
Xirfadlayaasha warshadaha ayaa ku dhawaad ​​si isku mid ah ugu kala qaybsan yihiin in kuwa hodanka ah kaliya ay awoodi doonaan inay awoodaan fasaxyada mustaqbalka, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris ay maanta (Isniin 1 November) soo saartay WTM London, oo ah hormuudka munaasabadda caalamiga ah ee warshadaha safarka.
Ilaa 1000 xirfadlayaal ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa wax laga weydiiyey saameynta kororka qiimaha aadka loo saadaalinayo ee ka dhashay masiibada suuqa guud ahaan. In ka badan kala badh (51%) ayaa ka walaacsanaa in socdaalku uu noqon doono kaydka taajiriinta, iyadoo 49% ay diidan yihiin.
Warbixinta Wershadaha WTM ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay heerka kororka, iyadoo natiijada saafiga ah ay xaqiijisay in qiimaha lagu dejiyay inuu kordho sanadka 2022. In ka badan hal-meelood saddexdii (35%) muunada ayaa sheegay in qiimaha ay u badan tahay inuu kordho inta u dhaxaysa 1% iyo 20% marka la barbar dhigo sanadkan. Si kastaba ha ahaatee, cadaadiska qiimaha badan iyo baahida loo qabo soo kabashada dakhliga lumay inta lagu jiro cudurka faafa ayaa ka dhigan in in ka badan hal-kiiba (12%) ay filayaan in ay kor u qaadaan qiimaha in ka badan 20%.
Dhanka kale, qaar ayaa saadaalinaya in qiimuhu hoos u dhaco iyadoo 15% ay saadaaliyeen in hoos u dhac yar uu u dhaxeeyo 1% ilaa 20%, halka 9% ay sheegeen in qiimaha shirkadooda uu aad hoos ugu dhici doono, in ka badan 20%.
Qiyaastii shan meelood meel (22%) waxay filayaan in qiimayaashu isku mid noqdaan.
Macaamiisha Boqortooyada Midowday (UK) waxay sidoo kale ogyihiin in saameynta mataanaha ee COVID-19 iyo Brexit ee qiimaha ay awood u leedahay inay saameyn ku yeelato awood-u-helka safarka, iyadoo 70% ay qireen in tani ay tahay walaac mustaqbalka.
Simon Press, WTM London, Agaasimaha Bandhiga, ayaa yidhi: "Uk, wadarta kharashka safarka dibada ee xagaaga ayaa la leexiyay iyada oo la bixinayo kharashka tijaabada, halka baahida joogitaanka ay keentay sahayda yaraanta iyo kor u kaca qiimaha. Cadaadisyadan gaarka ah ayaa laga yaabaa ama laga yaabaa inaan weli lagu dabaqi karin sanadka soo socda, laakiin natiijooyinka warshadaha ayaa ah kuwo aan mugdi ku jirin - qiimaha ayaa kor u kici doona 2022.
"Qaybo badan oo safarka ah ayaa fariintooda macaamiishooda u waday 'qiimaha' halkii ay 'qiimaha' ka ahaan lahaayeen. Caqabada hor taala warshadaha ayaa ah in la hubiyo in ay keeni karaan wax soo saar iyo waayo-aragnimo taas oo qiil uga dhigaysa qiimaha kor u kaca ee qofka socotada ah kaas oo ilaashanaya xadkiisa, laakiin iyaga oo aan qiimahooda suuqa ka bixin.